HamroSagarmatha:: नागरिकको साथी बनेर काम गर्न प्रहरीलाई एआईजी शर्माको आग्रह - HamroSagarmatha
नागरिकको साथी बनेर काम गर्न प्रहरीलाई एआईजी शर्माको आग्रह
सीताराम चौधरी,चन्द्रौटा(कपिलवस्तु), २१ पुस । ﻿
नेपाल प्रहरीका अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्माले प्रहरीलाई नागरिकको साथी भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
कपिलवस्तुको चन्द्रौटास्थित वडा प्रहरी कार्यालयमा आयोजित अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानमा नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले नागरिकविना प्रहरीले केही पनि गर्न नसक्ने हुँदा नागरिकको साथी बनेर काम गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गर्नुभएको हो । नेपालको शान्ति सुरक्षा चुस्तदुरुस्त बनाउन र अपराधिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउन नागरिकसँगै रहेर काम गर्ने उहाँले उद्घोष गर्नुभयो ।
नागरिकबाट उठेका सवालप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै एआईजी शर्माले प्रहरीको अनुसन्धानप्रति कुनै पनि शंका नगर्न समेत नागरिकसँग अनुरोध गर्नुभयो । अनुसन्धानको आफ्नो पाटो हुने बताउँदै उहाँले नेपाल प्रहरीमा रहेका ७३ हजार जनशक्तिमध्ये १० प्रतिशतलाई अपराध अनुसन्धान समूहमा विशिष्टीकृत गरेर राख्ने सिस्टम रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
आफ्नो पर्दा ठीक अर्काको पर्दा बेठीकको मानसिकता त्याग्नुपर्ने एआईजी शर्माले नागरिकसँग अनुरोध समेत गर्नुभयो । नागरिक र प्रहरी मिलेर समाजलाई सुरक्षित गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताउँदै उहाँले समाजमा अपराधीहरुको मनोबल बढ्न नदिन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रहरी र नागरिक एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, एउटा विना अर्काको अस्तित्व कायम नहुँने समेत उहाँले उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो –“नागरिक नभए प्रहरीको काम हुँदैन भने प्रहरी नभए समाज सुरक्षित हुँदैन ।” समाज सुरक्षित राख्नलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, प्रहरी र नागरिक मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । नागरिक वर्दी विनाका प्रहरी र प्रहरी वर्दी विनाका नागरिक भएको संज्ञा दिंदै एआईजी शर्माले नागरिकसँग सधैं मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरुले एआईजी समक्ष प्रश्नैप्रश्न तेर्साएका थिए । कपिलवस्तुमा शान्ति, सुरक्षा कायम हुने कहिले? महिलाहरु कहिले सुरक्षित हुने? चोरी तस्कार कसरी रोकिन्छ? सडक दुर्घटना कसरी कम गर्न सकिन्छ? प्रहरी प्रशासनको काम किन प्रभावकारी भएन? प्रहरी भर्नामा किन पारदर्शिता हुदैन? जस्ता प्रश्नैप्रश्नका चाङ लागेका थिए एआईजी समक्ष ।
कार्यक्रममा अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शेरबहादुर बस्नेत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक भोजजंग शाह, इलाका प्रशासन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत जगदीश अर्याल, वरिष्ठ समाजसेवी देवकुमार भारती, यस क्षेत्रका प्रशासनिक निकायका प्रमुख, राजनीतिज्ञ, मानवअधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, समाजसेवी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।